Downhole mota, Drill Bits, Drilling Zvishandiso - DeepFast
PDC Bit technical Kubatsira
Tine akasiyana epasirose epamberi ehunyanzvi ekuboora chishandiso dhizaini uye bvunzo software, ichigadzira yayo yega dhizaini & yekuongorora system ine simba dhizaini uye optimization kugona.
Drill Bit Dhizaini
DeepFast yakagadzirirwa yakazara yakazara CAD / CAM system iyo inogona kuzvimiririra kupedzisa iyo yese nzira yekuboora dhizaini. Yepamberi tekinoroji inoshandiswa mukuboora zvishoma dhizaini.
Nereza Simba Kuongorora
Yedu komputa software yakatsaurirwa kuboora zvishoma kuenzanisa pasi pakaoma kuchera mamiriro. Iyo inobvumira mainjiniya ekushandisa kugadzirisa iyo 3D modhi yeiyo chibooreso zvishoma.
Yedu komputa software inokodzera chero oiri uye gasi munda mupasi, nekushandisa yakavakirwa-mukati matemplate kuburitsa akasiyana magiraidhi uye data data mabasa.
Drill Bit Hydraulic Kuongorora
DeepFast inoshandisa yakakwira CFD software kune manhamba kuenzanisa iwo matatu-mativi kuyerera kweiyo PDC bit. Kubudikidza nekunyepedzera kwedhijitari, iyo hydraulic chimiro cheicho chibhorani chakagadziriswa.
DeepFast inogara iri kusimukira API yeruzhinji kambani ine huwandu hwekugadzirwa patent. Parizvino, isu tine zvigadzirwa zvitsva zvakadai seDual Drill Accelerator, Micro Core bit, Modular bit nezvimwe.
Parizvino, isu takapa masevhisi kune anopfuura 10000 Wells, uye isu takazvipira mukuvandudza mwero wekupinda, kuchengetedza mutengo wevashandisi munzvimbo dzese dzakakura dzemafuta uye gasi uye kuwana kuita kuri nani pasirese.
ChiGerman Downhole mota Technology
Rubha inosanganiswa neyepakutanga zvigadzirwa.
Yakaburitswa pamadhi-e-iyo-emuchina michina ine inoenderera mhando vimbiso.
Mafambisirwo epamberi emabasa akaoma.
State-of-the-art jekiseni rerabha.
Rubber Stators uye ma rotor akagadzirwa zvichienderana nesvomhu mitemo.
Kuvandudza kwehunhu hunesimba hwechikamu chemagetsi.
Zvinyorwa zvemhando yepamusoro kupfuura zvakajairwa.
Kushandiswa kwemaawa anosvika chiuru.
Kwakanaka manejimendi cheni manejimendi.
Inoshanda, inokurudzira dhizaini dhizaini.
Kufunga kwevatengi-kwakatarisana uye ruzivo rwakafara rwezvinhu zvepasirese senge ma rotors nemamaki.
isu tatanga iko kutsvagisa, kusimudzira, kugadzira uye kushandisa yakakwira kuita inodonha mota.
Tine zvigadzirwa zvitsva zvakaita seDual Drill Accelerator, Micro Core bit, Modular bit nezvimwe.
Yakaisirwa Core Bit
Chinese Professional Drilling Bit Masizi Oiri Wel ...
Mukudzokororwa kwayo kubva pakudonha kwe2020, mutengo weBrent wakazara ne $ 70 / bbl. Mitengo yepamusoro muna2021 inoreva kukwira kwemari kwevarimi, pamwe kunyangwe kurekodha-kumisikidza yakakwira. Mune ino nharaunda, wepasirese zviwanikwa zviwanikwa, Wood Mackenzie akati vashandi vanofanirwa kungwarira. "Nepo mutengo ...
HOUSTON- Halliburton Kambani yakaunza Crush & Shear Mbeu dzakauchikwa Drill Bit, tekinoroji nyowani inosanganisa kushanda kwevechinyakare PDC vanocheka netoriki-yekudzora kugona kwezvinhu zvinokungurutsa kuwedzera kuchera kugona uye kuwedzera kudzikama zvishoma kuburikidza nekuchinja mafomati. Cu ...